စစ်ကိုင်း ရတနာစေတီ ဆင်များရှင် ဘုရားကြီးအား လက်ရှိအမြင့်ထက် အမြင့်ဥာဏ်တော် ၃၅ ပေ တိုးမြှင်? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း၊ ဇွန် ၂၁
ရွှေကျင်တွဲဖက်သာသနာပိုင်သဒ္ဓမ္မသီတဂူ ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင် ဥာဏိဿရ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်အတွင်း အပြီးပြုပြင်မည့် စစ်ကိုင်းမြို့ ရတနာစေတီဆင်များ ရှင်ဘုရားကြီးအား လက်ရှိအမြင့်ထက် အမြင့်ဥာဏ်တော် ၃၅ ပေ တိုးမြှင့်တည်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဇွန် ၂၁ ရက်က ကျင်းပသည့် သြဝါဒါ စရိယဆရာတော်ကြီးများထံမှ သြဝါဒခံယူပွဲတွင် သီတဂူဆရာ တော်ကြီးကတင်ပြလျှောက်ထားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ရတနာစေတီ ဆင်များရှင် ဘုရားကြီး အကြီးစား ပြုပြင်မွမ်းမံ တည်ဆောက်မည့် အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဇွန် ၂၁ ရက်က စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သီတဂူဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဌာန သီတဂူသံဝေဇနိယ ဓမ္မဗိမာန် တော်ကြီးတွင် ဆင်များရှင်ဘုရားကြီး သြဝါဒါစရိယဆရာတော်ကြီးများထံမှ သီတဂူဆရာတော်ကြီးက သြဝါဒခံယူသည်။ ”၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ငလျင်ကြောင့် စေတီတော်ကြီး လုံးတော်တွင် ကြီးမားသည့် အက်ကွဲဒဏ်ရာများဖြစ် ပေါ်ခဲ့လို့ ကြံ့ခိုင်မှုမရှိတော့ပါဘူး။ အခု ပြန်လည်မွမ်းမံတည်တဲ့အခါ မူလလက်ရာ သီဟိုဠ်ပုံရတနာ စေတီတော်နဲ့တူအောင်ပြုပြင်ပြီး ထီးတော်များကို လုံးဝပြုပြင်မှာ မဟုတ်ဘဲ အပြင်ကနေ သံကူကွန်ကရစ်နဲ့ စနစ်တကျခိုင်ခန့်အောင်တည်မှာဖြစ်လို့ အမြင့်ဥာဏ်တော် ၃၅ ပေအထိ တိုးမြှင့်တည်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု သီတဂူဆရာတော်ကြီးက မိန့်ကြားသည်။
ရတနာစေတီဆင်များရှင် ဘုရားကြီးမှာ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ငါးကြိမ်အထိ ပြုပြင်တည်ခဲ့ရပြီး သီတဂူဆရာတော်ကြီးဦးဆောင်ပြု ပြင်တည်ဆောက်ရာတွင် အောက်ခြေ အချင်း ပေ ၁၂ဝ၊ စေတီအမြင့် ၁၈၁ ပေ ၆ လက်မရှိမည်ဖြစ်၍ မူလတည်ခဲ့သည့် စေတီတော်အထက် ထီးတော်အပါအဝင် ဥာဏ် တော်အမြင့် ၃၅ ပေတိုးမြှင့်တည်မည်ဖြစ်သည်။ စေတီတော်ကြီး အကြီးစား ပြုပြင်တည်ရန်အတွက် သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ကျပ်သိန်း ၂၅ဝဝ မတည်လှူဒါန်းသည့်အပြင် စိန်ဖူး တော်နှင့် ငှက်မြတ်နားတော်များအား တစ်ဦးတည်း အလှူရှင်အ ဖြစ် လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပြီး သြဝါဒါ စရိယဆရာတော်ကြီးများထံမှ သြ ဝါဒခံယူပွဲတွင် ဆင်များရှင် သြဝါ ဒါစရိယဆရာတော်ကြီး ၁၂ ပါး ကြွရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ကာ ဆင်များရှင် ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့က ဆရာ တော်ကြီးများအား လှူဖွယ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်း ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းမြို့နယ်တွင် သက်ငယ် မုဒိမ်းနှင့် လုယက်မှုများ များပြားလာသောကြောင့် ရဲကင်းများချ၍
ညောင်ဦးမြို့နယ်၌ ချုံနွယ်များ ရှင်းလင်းရာမှ တွေ့ရှိခဲ့သည့် ရှေးဟောင်း စေတီတော်များ ပြန်??
‘မုန်းစွဲ’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး နှစ်လကျော်ကြာသည့်တိုင် ရုံတင်နေရဆဲဖြစ်
ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများ ရောင်းချနိုင်ရေး အာဆီယံခြောက်နိုင်ငံရှိ အိမ်ခြံမြေအသင်းများနှင့် န?
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် သတင်းထောက်ကိစ္စတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်၍ ဗင်နီဇွဲလားက ဂျာမနီသံအမတ်ကြီးကို န?
တရားသူကြီး၊ အမှုသည်နှင့် သက်သေများ တရားခွင်တွင် တိကျလေးနက်စွာ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရေး အဆို အမ?
တစ်ဆို့မှုများ မရှိပါက NCA လမ်းကြောင်း အတိုင်း ရှေ့ဆက်ရန် အခက်အခဲ မရှိဟုဆို